Guiyang Zhongshuge Ebe A Na-Ere Akwụkwọ - Imewe Mmewe
Ebe A Na-Ere Akwụkwọ
Fraịdee 2 Eprel 2021
Ebe A Na-Ere Akwụkwọ Site n'okporo ụzọ ndị dị n’elu ugwu na stalactite ukwu ndị na-achọ akwụkwọ, akwụkwọ a na-ewebata ndị na-agụ ya n’ime ụwa nke ọgba Karst. N'ụzọ dị otu a, otu ndị na-esepụta ihe na-eweta ahụmịhe anya na-enweghị atụ ma n'otu oge ahụ na-agbasa ìgwè mmadụ buru ibu na ọdịbendị ha. Guiyang Zhongshuge abụrụla ihe omume ọdịnala na akara obodo n'obodo Guiyang. Na mgbakwunye, ọ na-ejikọkwa ohere nke ọdịbendị ọdịbendị dị na Guiyang.
Aha oru ngo : Guiyang Zhongshuge, Aha ndị na-emepụta ya : Li Xiang, Aha onye ahịa : X+Living.
Il Mosnel QdE 2012 Mpempe Akwụkwọ Na-Egbu Egbu Na Mkpọ Mmanya Satọdee 8 Mee
The Float Ụlọ Ọrụ Na-Ahụ Maka Ụlọ Fraịdee 7 Mee
Or2 Ọdịdị Fotochromic Kanopi Tọọzdee 6 Mee
Ajụjụ ọnụ nke ụbọchị Satọdee 8 Mee
Chepụta akụkọ mgbe ochie Fraịdee 7 Mee
Nhazi nke ubochi Tọọzdee 6 Mee
Onye rụrụ ụbọchị Wenezdee 5 Mee
Otu mmebe nke ụbọchị Tiuzdee 4 Mee
Ebe A Na-Ere Akwụkwọ Li Xiang Guiyang Zhongshuge